Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Riix halkan haddii kani yahay war-saxaafadeedkaaga! » Tartanka Jiidista Adduunka: Tartanka Torrence wuxuu ku biirayaa Kooxda Toyota
Torrence Racing wuxuu ku biiri doonaa Kooxda Toyota isagoo ka bilaaban doona 2022 NHRA Camping World Drag Racing Series Series. Ku-darka dadaalka labada kooxood ee Torrence Racing wuxuu ballaarinayaa iskaashiga kooxda Toyota oo uu ku jiro shan jiidaya Shidaalka Sare iyo laba Baabuur Qosol leh.
“Torrence Racing waa hormuudka tartanka NHRA, waxaana rajeyneynaa inaan Steve iyo Billy soo gelinno qoyska Toyota sanadka 2022,” ayuu yiri Paul Doleshal, maamulaha kooxda, Motorsports and Assets, Toyota Motor North America (TMNA). “Waxaan wadnaa darawalo cajiib ah iyo wada -hawlgalayaasha kooxda ee muuqaalka NHRA. Ku darista Steve iyo Billy Torrence ayaa kaliya kor u qaadi doonta safkaas aadka u wanaagsan. ”
Torrence Racing wuxuu xoog ku haystay NHRA sanadihii la soo dhaafay. Steve wuxuu u kaxeeyay 49 guulood 263 dhacdooyin xirfadeed iyo saddex horyaal oo Shidaal Sare ah. Xilli ciyaareedkan, Steve wuxuu guuleystay sagaal jeer waana hogaamiyaha dhibcaha hadda. Aabihii, Billy, wuxuu guuleystay laba jeer sanadkan iyo siddeed jeer xirfadiisa ciyaareed. In kasta oo uu wado jadwal waqti-dhiman ah, Billy hadda waa shanaad ee dhibcaha guud ee dhibcaha.
Toyota waxay siisaa kooxaheeda NHRA baabuurta jiida, oo ay weheliso injineernimada, teknolojiyadda iyo taageerada waddada dhinaca TRD (Toyota Racing Development). Ka sokow Torrence Racing, Toyota waxay sii wadi doontaa taageeridda kooxda Antron Brown ee dhowaan la aasaasay-AB Motorsports, DC Motorsports iyo Kalitta Motorsports 'dadaalka saddexda koox ee 2022.
"Waxaa laygu barakeeyey inaan guulo badan ka gaaray xirfadeyda NHRA, laakiin waxaan dareemayaa in iskaashigan cusub ee Toyota iyo TRD uu kaliya hagaajin doono waxa Torrence Racing ku samayn karo wadada," ayuu yiri Steve Torrence. “Waxaan indhahayga ku arkay in darawalada iyo kooxaha la xiriira Toyota aysan kaliya qeyb ka ahayn liiskooda, balse ay ka tirsan yihiin qoys. Iyagu waa soo -saare khaas ah oo dadka hormariya, taasina waa nooca iskaashi ee kooxdeennu ku faraxsan tahay inay qayb ka noqoto bilowga xilli ciyaareedka soo socda. ”
Steve iyo Billy Torrence waxay ku biirayaan safka darawalnimada Toyota oo ay ku jiraan saddex jeer NHRA Top Fuel champion Brown, ku guuleystaha Muwaadiniinta Mareykanka Alexis DeJoria, 49-jeer ku guuleystay tartanka Doug Kalitta, 2013 Horyaalka Shidaalka Sare Shawn Langdon iyo horyaalnimada Qosolka 2018 JR Todd.
Toyota waxay u dabaaldegaysaa xilli -ciyaareedkeedii 20 -aad NHRA sannadkan. Darawalada Toyota ayaa ku guuleystay 137 Baabuur Shidaal Sare ah iyo 43 Baabuur Qosol leh oo ay weheliyaan lix Hormuud oo Shidaal ah iyo saddex horyaal oo Baabuur Qosol leh intii ay ku jireen taxanaha.